बस र ट्रक एक आ’पसमा ठो’क्किँदा १५ जनाको मृ’त्यु, २५ घा’इते ! – Life Nepali
बस र ट्रक एक आ’पसमा ठो’क्किँदा १५ जनाको मृ’त्यु, २५ घा’इते !
नयाँ दिल्ली २६ पुष २०७६, शनिबार । भा’रतमा भएको स’वारी दु’र्घ’टनामा परी क’म्तीमा १५ जनाको मृ’त्यु भएको छ । वि’परित दि’शाबाट आ’इरहेका या’त्रुवा’हक बस र ट्रक शु’क्रबार रा’ती एक आ’पसमा ठो’क्किएर भ’एको दुर्घ’टनामा परी अरु २५ जना घा’इते भएका छन् । दे’शको उत्त’रप्रदेश रा’ज्यमा दु’र्घटना भ’एको स्था’नीय प्रहरी अ’धिकारीहरुले सि’न्ह्वालाई टे’लिफोनमा जा’नकारी दिएका छन् । दुवै सा’धन एक आ’पसमा ठो’क्किएपछि बसमा आ’गला’गी भएको थियो ।
ब’समा झण्डै ५० ज’ना या’त्रु रहेका थिए । उत्तर प्रदेशको कान्नौज जिल्लाबाट रा’जस्थान रा’ज्यको रा’जधानी जयपुरतर्फ जाँदै गरेको बससँग ट्र’क ठो’क्किएको हो । प्रारम्भिक अनु’सन्धानले ट्रक चा’लकको लाप’र्वाहीका कार’ण दुर्घ’टना भएको देखिएको प्रहरी अधिकारीहरुले जनाएका छन् । ट्रक चा’लकले उ’ल्टो दिशामा तिव्र गतिले ट्रक चलाएको उनीहरुको भनाई छ ।
प्रत्यक्षदर्शीहरुले दिएको जानकारीअनुसार बस र ट्रक एक आपसमा ठो’क्किएपछि क’म्तीमा दुईभन्दा बढी इ’न्धन ट्याङ्की वि’स्फोटन समेत भएका थिए । वि’स्फोटनसँगै आ’गला’गी पनि भएको उनीहरुले बताएका छन् । दु’र्घटनामा परी घा’इते भएकाहरुलाई स्था’नीय वि’भिन्न अ’स्पतालहरुमा भर्ना गरिएको स्थानीय स’ञ्चार माध्यमहरुले जनाएका छन् । “अझै १८ देखि २० जना भित्र च्यापिएको अनुमान गरिएको छ, उनीहरुलाई जि’वितै बा’हिर नि’काल्ने प्रयास भइरहेको पनि छ,” एक प्रहरी अधिकारीले भने । दु’र्घट’नाको खबर थाहा पाएपछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दुःख व्य’क्त गर्नुभएको छ ।- एजेन्सी,.
Previous दराज प’ल्टिँदा चे’पिएर बालकको दु:खद नि’धन”
Next कतारबाट भटाभट नेपाली फिर्ता आउने थाले !